Sorona Masina ny 03/06/2022 - Fihirana Katolika Malagasy
Sorona Masina ny 03/06/2022
Apôk. 1, 5-6
Tian’i Kristy tokoa isika nosasany tamin’ny Rany ho afa-pahotana, ary nataony fanjakana mpisorona ho an’Andriamanitra Rainy. Aleloia!
Andriamanitra ô, nomenao voninahitra i Kristy Zanakao ary nirahinao hanazava anay ny Fanahy Masina, ka novohainao ny varavarana hidiranay any amin’ny mandrakizay; koa mihanta aminao izahay mandray anjara amin’ny fanomezana sarobidy, mba hitombo zotom-po hanompo Anao, ary hitombo finoana hankatò ny Teninao.
I Jesoa efa maty, nefa lazain’i Paoly hoe velona.
Tamin’izany andro izany, tonga tany Sezarea i Agripà mpanjaka sy i Berenisy, hiarahaba an’i Festosa. Naharitra andro maromaro no nitoerany tao, ka nambaran’i Festosa tamin’ny mpanjaka ny amin’i Paoly. Hoy izy: “Misy mpifatotra anankiray navelan’i Feliksa eto. Fony aho tany Jerosalema, dia nampangain’ny lehiben’ny mpisorona sy ny loholon’ny Jody tamiko izy io, sady nangatahiny hohelohina. Fa hoy ny navaliko azy ireo: Tsy fanaon’ny Rômanina ny manameloka olona raha tsy efa nifanatrika tamin’ny mpiampanga azy ny ampangaina, ka nahazo nanala tsiny ny tenany amin’izay iampangana azy, Dia tonga tatý izy ireo, ka tsy nangataka andro akory aho, fa ny ampitso ihany dia nipetraka teo amin’ny fitsarana sy nampaka ilay lehilahy. Nony nitsangana ry zareo mpiampanga, dia tsy heloka araka izay nampoiziko no nitoriany azy, fa ady hevitra momba ny fivavahany sy momba an’i Jesoa anankiray efa maty, nefa lazain’i Paoly hoe velona. Tsy hitako be ihany izay hamotorana izany zavatra izany, ka nanontany an-dralehilahy aho sao tiany ny hotsaraina any Jerosalema ny amin’izany. Dia nangataka hotsarain’ny amperora i Paoly, ka nasaiko nambenana mandra-pandefako azy any amin’i Sezara.”
Salamo 102, 1-2. 11-12. 19-20ab
Fiv.: Naorin’ny Tompo any an-danitra ny fiketrahany.
Isaory ny Tompo, ry fanahiko; sy ny Anarany masina, ry ato anatiko rehetra! Isaory ny Tompo, ry fanahiko. Aza misy hadinoina ny soa avy aminy.
Fa tahaka ny haavon’ny lanitra ambonin’ny tany, no haben’ny hatsaram-pony amin’izay matahotra Azy. Tahaka ny ifanalaviran’ny atsinanana sy andrefana, no analavirany amintsika ny hadisoantsika,
Naoriny any an-danitra ny fiketrahany; mifehy an’izao rehetra izao ny Fanjakany! Misaora ny Tompo, ianareo Anjeliny, izay feno hery hankatò ny didiny.
Jo. 21, 15-19
Fahano ny zanak’ondriko; fahano ny reniondriko.
Tamin’izany andro izany, nony avy nisakafo niaraka tamin’ny mpianany i Jesoa, dia nanao tamin’i Simôna Piera hoe: “Ry Simôna zanak’i Joany, moa tia Ahy mihoatra noho ireto va ianao?” Ka hoy ny navaliny Azy: “Eny, Tompoko, fantatrao fa tiako Ianao.” Dia hoy Izy taminy: “Fahano ny zanak’ondriko.” Ary hoy indray Izy taminy fanindroany: “Ry Simôna zanak’i Joany, moa tia Ahy va ianao?” Ka hoy ny navaliny Azy: “Eny, Tompoko, fantatrao fa tiako Ianao.” Dia hoy Izy taminy: “Fahano ny zanak’ondriko.” Ary hoy indray Izy taminy fanintelony: “Ry Simôna zanak’i Joany, moa tia Ahy va ianao?” Dia nalahelo i Piera fa nanontaniany fanintelony hoe: Moa tia Ahy va ianao? ka hoy izy taminy: “Ianao mahalala ny zavatra rehetra, Tompoko, ka fantatrao fa tiako Ianao.” Dia hoy Izy taminy: “Fahano àry ny reniondriko. Lazaiko marina dia marina aminao: Fony mbola tanora ianao dia nahasikin-tena, sy nandeha tamin’izay tianao haleha; fa rahefa antitra kosa ianao, dia hiraviravy ny tananao, ka olon-kafa no hanasikina anao, sy hitondra anao amin’izay tsy tianao.”
Izy no nilaza izany dia mba hanambara ny fombam-pahafatesana hanomezan’i Piera voninahitra an’Andriamanitra. Ary rahefa nilaza izany Izy, dia nanao taminy hoe: “Manaraha Ahy.”
Mba topazo maso miantra, ry Tompo, ny fanatitray vahoakanao ho sitraky ny fonao, dia hirotsaka ny Fanahy Masina handio ny fonay.
Rahefa tonga ilay Fanahy fahamarinana dia hitondra anareo amin’ny marina rehetra, hoy ny Tompo. Aleloia!
Andriamanitra ô, diovinao sy fahananao amin’ny Kômonio masina izahay, ka mba havaozy ny herinay ary omeo anay ny fiainana mandrakizay.